Appointiv: Streamline na akpaaka nhazi oge n'iji Salesforce | Martech Zone
Appointiv: Streamline na akpaaka nhazi oge n'iji Salesforce
Otu n'ime ndị ahịa anyị nọ na ụlọ ọrụ ahụike wee jụọ anyị ka anyị mee nyochaa ojiji ha Salesforce yana inye ụfọdụ ọzụzụ na nchịkwa ka ha wee nwee ike ịbawanye nlọghachi ha na ntinye ego. Otu uru nke iji ikpo okwu dị ka Salesforce bụ nkwado ya na-enweghị atụ maka ntinye ndị ọzọ na ntinye aka site na ngwa ahịa ngwa ya, AppExchange.
Otu n'ime mgbanwe omume dị ịrịba ama nke mere na njem nke onye na-azụ ahịa online bụ ikike iji onwe ya rụọ ọrụ. Dị ka a asịwo, M chọrọ inyocha nsogbu online, mata ngwọta, nyochaa mgbere, na… n'ikpeazụ… ga-esi ruo ọgwụgwụ ahịrị dị ka m nwere ike tupu ọ bụla nwere ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa.
Usoro nhazi oge akpaghị aka
Anyị niile na-na site nhazi oge hell… na-arụ ọrụ azụ na pụta n'etiti niile isi mkpebi-eme na email na-agbalị ịchọta a adaba oge jikọọ na-enwe a nzukọ. Ana m eleda usoro a anya… ma anyị tinye ego na nhazi oge nhọpụta akpaghị aka maka atụmanya anyị na ndị ahịa anyị izute anyị.
Ịhazi oge nhọpụta nke akpaaka, nke ọrụ onwe bụ ụzọ mara mma iji bulie ọnụego nhazi oge maka ndị otu ahịa gị. Usoro ikpo okwu ndị a na-atụnyere kalenda ma na-achọta oge n'etiti ndị otu, ọbụlagodi otu niile. Mana gịnị ma ọ bụrụ na nzukọ gị na-eji Salesforce ma chọọ ọrụ ahụ edekọ na ahịa Cloud?
Nhọpụta na-eme oge nhọpụta dị mgbagwoju anya na-ahazi ikuku nwere usoro ahaziri ahazi, na-agbanwe agbanwe nke Salesforce kwadoro 100%. Megharịa usoro ntuziaka wee lelee ka ọrụ gị na-amalite na-aga! Appointiv bụ a ngwa Salesforce nke pụtara na ị budata naanị na AppExchange wee bido - enweghị njikọ achọrọ!
Site na Appointiv, ị nwere ike ịhapụ ndị ahịa gị ka ha denye ma jikwaa nhọpụta nke ha n'ihi na a na-emelite ndị otu gị niile na Salesforce ozugbo n'agbanyeghị kalịnda ha na-eji. Appointiv na-enye usoro nhazi oge na-enweghị nsogbu nke na-anabata ọtụtụ ndị otu otu nwere usoro na kalenda dị iche iche.
Ntọlite ​​dị mfe, na-etinye ụdị webụ yana hazie akara gị site na ngwa Appointiv:
Ọnụ ego maka Appointiv bụ na onye ọrụ ọ bụla… ma ị nwere ike itinye ndị ọbịa ọgbakọ mpụga na-enweghị ikike Salesforce maka ego mbelata. Ọnụ ahịa kwụ ọtọ pụtakwara:
Ọnweghị ikike ọzọ achọrọ maka ndị ọrụ Salesforce Experience (Community) gị.
Ọnweghị ikike Salesforce maka ịnweta API achọrọ maka Salesforce Professional Edition orgs.
Ọnweghị ikikere Salesforce ọzọ achọrọ iji guzobe ndị ọbịa gị na-abụghị ndị Salesforce.
Appointiv adịghị echekwa ndị ahịa data n'èzí gị Salesforce ihe atụ… otú e nweghị nchegbu banyere regulatory okwu na ndị ọzọ na saịtị nwere ike na-agbari ma ọ bụ na-agafe data azụ na pụta.
Bido ọnwụnwa Appointiv gị n'efu
Nkpughe: Abụ m onye mmekọ Highbridge mana enweghị njikọ na Appointiv.
Tags: ịgbanweenhọpụtausoro ihe omumemwekota kalendaoge ịre ahịaigwe ojiindị ahịaire ere ahịanhazi oge nke salesforcesalesforce kalenda mwekotaoge webụ
Ọnụ ọgụgụ ahịa ọdịnaya B2B maka 2021